Ndị na-emepụta ihe na-edobe karama karama & ndị na-ebunye ihe - Ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nkedo nke China
Igwe eji akpọ aha
Igwe eji akara akpaaka
Igwe ndopụta ọkara akpaaka
Igwe eji akara karama
Igbe/Katọn na igwe ndị ọzọ na-edepụta aha elu
Igwe eji akara kaadị/akpa/akpa
Igwe nledo n'akụkụ ngwaahịa
Igwe eji akara mmepụta ihe
Igwe eji nbipụta akara
Igwe eji akara akara akara
Igwe eji aha ahaziri aha ya
Igwe ndochi akpaaka
Igwe na-ejuputa ọkara akpaaka
Igwe mkpuchi mkpuchi mkpuchi
Usoro ihe enyemaka
Ejila igwe akàrà na ịkpụcha
Igwe nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ
Ọdịdị ụlọ ọrụ
Ụlọ ọrụ ọgwụ
Ụlọ ọrụ nri
Ụlọ ọrụ Chemical
Ụlọ ọrụ eletrọnịkị
Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere igwe nrịbama dị elu, igwe na-ejuputa, igwe mkpuchi, igwe na-ebelata, igwe na-ejide onwe ya na akụrụngwa metụtara ya.Ọ nwere ihe nrịbama nke zuru oke, gụnyere akpaaka na nke ọkara akpaaka na ntanetị na ntinye aha, karama okirikiri, karama square, igwe na-edobe karama ewepụghị, igwe nkuku katọn;Igwe akara n'akụkụ abụọ, dabara maka ngwaahịa dị iche iche, wdg. Igwe niile agafeela ISO9001 na asambodo CE.
FKA-601 Igwe anaghị agba nchara akpaaka
FKS-50 Akpaaka nkuku akara igwe
Igwe eji akara akara FK839 akpaghị aka ala
FKS-60 zuru akpaaka L ụdị akara na ịcha Mac ...
FKF801 Akpaaka Tube Obere karama Capping Filling m ...
Igwe eji akara FKP-601 nwere akara nbipụta cache
Igwe ntunye ahịrị akụkụ akpaaka FK836
FK911 Akpaaka Igwe ndopụta akụkụ abụọ
FK814 Akpaaka n'elu&Ottom Labeling Machine
Igwe eji akara kaadị FK812 akpaaka / akpa / katọn
Igwe eji akara ụgbọ elu FK811 akpaaka
FKF601 20 ~ 1000ml Igwe na-ejuputa mmiri
FK617 Semi akpaka ụgbọ elu Rolling Labeling Machine
FK807 Akpaaka kwụ ọtọ okirikiri karama akara Mac...
FK805 Akpaaka Igwe eji akara karama okirikiri okirikiri (Cylin...
FK803 Akpaaka Rotary Round Bottle Labeling Machine
(Ngwaahịa niile nwere ike ịgbakwunye ọrụ mbipụta ụbọchị)
Igwe na-ede akara FK603 Semi-Automatic Round Bottle Labeling Machine
Igwe akara FK603 dabara adaba maka ịde aha ngwaahịa cylindrical na conical dị iche iche, dị ka karama ihe ịchọ mma gburugburu, karama mmanya uhie, karama ọgwụ, karama cone, karama plastik, wdg.
Igwe akara akara FK603 nwere ike ịghọta otu akara okirikiri na akara akara ọkara, ma nwee ike ghọta akara akara okpukpu abụọ n'akụkụ abụọ nke ngwaahịa ahụ.Enwere ike ịhazi oghere n'etiti akara ihu na azụ, na usoro nhazi ahụ dịkwa nnọọ mfe.A na-ejikarị ya na nri, ihe ịchọ mma, kemịkalụ, mmanya, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ngwaahịa nwere obere akụkụ:
FK803 dabara adaba maka ịdepụta ngwaahịa cylindrical na conical nke nkọwa dị iche iche, dị ka karama ihe ịchọ mma gburugburu, karama mmanya uhie, karama ọgwụ, karama cone, karama plastik, akara PET gburugburu karama, akara karama rọba, ite nri, wdg.
Igwe akara akara FK803 nwere ike ịghọta akara okirikiri zuru oke na akara okirikiri ọkara, ma ọ bụ akara akara okpukpu abụọ n'ihu na azụ nke ngwaahịa ahụ.Enwere ike ịhazi oghere n'etiti akara ihu na azụ, na usoro nhazi ahụ dịkwa nnọọ mfe.A na-ejikarị ya na akara karama okirikiri na nri, ihe ịchọ mma, ime mmanya, ọgwụ, ihe ọṅụṅụ, ụlọ ọrụ kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ma nwee ike ịghọta akara akara semicircular.
FK807 Automatic Horizontal Round Labeling Machine
FK807 dabara adaba maka ịde aha ngwaahịa cylindrical dị obere na conical dị iche iche, dị ka karama ịchọ mma gburugburu, obere karama ọgwụ, karama rọba, karama PET gburugburu 502 gluu karama, akara karama mmiri ọnụ, akara mkpịsị mkpịsị mkpịsị, akara lipstick, na obere obere ndị ọzọ. gburugburu karama wdg. Ọ na-ọtụtụ-eji na gburugburu karama labeling na nri, ntecha, wine Ndinam, ọgwụ, ihe ọṅụṅụ, chemical ụlọ ọrụ na ndị ọzọ na ọrụ, na ike na-aghọta zuru ngwaahịa mkpuchi labeling labeling.
FK606 Desktọpụ dị elu okirikiri okirikiri/Taper Labeller
FK606 Desktop High Speed ​​Round/Taper Bottle Labeling igwe dabara adaba maka taper na gburugburu karama, ike, bọket, akara akpa.
Ọrụ dị mfe, Ọsọ dị elu, igwe na-ewe obere ohere, enwere ike ibu ma na-ebugharị n'oge ọ bụla.
Ịrụ ọrụ, Dị nnọọ pịa akpaka mode button na ihuenyo mmetụ, na mgbe ahụ na-etinye ngwaahịa na conveyor otu otu, mgbe ahụ, ị ​​na-adịghị eme ọzọ labeling ga-agwụ agwụ.
Enwere ike idozi ya ka ịde akara akara n'otu ọnọdụ karama ahụ, nwere ike nweta mkpuchi zuru oke nke akara ngwaahịa, ma e jiri ya tụnyere FK606, ọ na-adị ngwa ngwa mana enweghị akara nrụnye na ntinye aha ngwaahịa n'ihu na azụ.Ejiri ya na nkwakọ ngwaahịa, nri, ihe ọṅụṅụ, kemịkalụ kwa ụbọchị, ọgwụ, ihe ịchọ mma na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
① FK616 adabara ụdịdị nkọwapụta nke karama Hexagon, square, gburugburu, ewepụghị na curved ngwaahịa labeling, dị ka nkwakọ igbe, gburugburu karama, ịchọ mma ewepụghị karama, curved mbadamba.
② FK616 nwere ike nweta akara mkpuchi mkpuchi zuru oke, akara ngosi ziri ezi nke akụkụ, akara okpukpu abụọ na akara akara atọ, akara n'ihu na azụ nke ngwaahịa ahụ, iji ọrụ ntinye aha abụọ, ị nwere ike ịhazigharị anya n'etiti akara abụọ ahụ, ejiri ọtụtụ ebe na nkwakọ ngwaahịa, ngwaahịa eletrọnịkị, ihe ịchọ mma, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
FK911 akpaka akpaaka nwere akụkụ abụọ dị mma maka akara otu akụkụ na nke nwere akụkụ abụọ nke karama dị larịị, karama gburugburu na karama square, dị ka karama shampoo, karama mmanụ mmanụ, karama aka sanitizer gburugburu, wdg, akụkụ abụọ ahụ bụ karama dị larịị. ejikọtara n'otu oge ahụ, akara okpukpu abụọ na-eme ka nrụpụta mmepụta ihe dị mma, akara ngosi dị elu, na-egosipụta àgwà dị mma nke ngwaahịa, ma melite asọmpi.A na-eji ya na kemịkalụ kwa ụbọchị, ihe ịchọ mma, petrochemical, pharmaceutical na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
A na-eji FKA-601 Automatic Bottle Unscramble igwe dị ka ihe nkwado iji dozie karama ndị ahụ n'oge a na-atụgharị chassis, nke mere na karama ndị ahụ na-abanye n'ime igwe na-ede aha ma ọ bụ eriri ebu nke ngwa ndị ọzọ n'usoro n'usoro dịka otu egwu si dị. .
Enwere ike ijikọ na njuputa na akara mmepụta akara.
① FK617 dabara maka ụdị nkọwa ọ bụla nke square, ewepụghị, curved na oge mgbe ngwaahịa n'elu labeling, dị ka nkwakọ igbe, ịchọ mma flat karama, convex igbe.
② FK617 nwere ike nweta akara mkpuchi mkpuchi ụgbọ elu zuru oke, akara ngosi mpaghara ziri ezi, akara ngosi multi-labelụ kwụ ọtọ na akara akara multi-labelụ kwụ ọtọ, nwere ike idozi oghere nke akara abụọ, nke a na-ejikarị na nkwakọ ngwaahịa, ngwaahịa eletrọnịkị, ihe ịchọ mma, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
③ FK617 nwere ọrụ ndị ọzọ na-abawanye: koodu nhazi ngwa nbipute ma ọ bụ ngwa nbipute ink-jet, mgbe ị na-ede aha, bipụta nọmba ogbe mmepụta doro anya, ụbọchị mmepụta, ụbọchị dị irè na ozi ndị ọzọ, koodu na labeling ga-arụ n'otu oge, melite arụmọrụ.
FK605 Desktọpụ Round/Taper Bottle Ndokwa Labeller
FK605 Desktop Round/Taper Bottle Labeling igwe dabara adaba maka taper na gburugburu karama, ịwụ, nwere ike ịde aha.
Arụ ọrụ dị mfe, nnukwu mmepụta, Machines na-ewe obere ohere, enwere ike ibugharị ngwa ngwa ma buru ya n'oge ọ bụla.
Ịrụ ọrụ, Naanị kpatụ ọnọdụ akpaka na ihuenyo mmetụ ahụ, wee tinye ngwaahịa ndị ahụ na ebufe n'otu n'otu, a ga-emecha akara akara.
Enwere ike idozi akara akara n'otu ọnọdụ karama ahụ, nwere ike nweta mkpuchi zuru oke nke akara ngwaahịa, enwere ike nweta akara ngwaahịa n'ihu na azụ yana ọrụ ntinye aha abụọ.Ejiri ya na nkwakọ ngwaahịa, nri, ihe ọṅụṅụ, kemịkalụ kwa ụbọchị, ọgwụ, ihe ịchọ mma na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
FK808 Igwe nrụbama karama akpaaka
Igwe akara FK808 dabara adaba maka ịde aha olu olu karama.A na-eji ya n'ọtụtụ karama gburugburu na cone karama olu na-ede aha na nri, ihe ịchọ mma, ime mmanya, ọgwụ, ihe ọṅụṅụ, ụlọ ọrụ kemịkalụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ma nwee ike ịghọta akara akara semicircular.
Igwe akara FK808 Enwere ike ịkpọ ya ọ bụghị naanị n'olu kamakwa na ahụ karama, ọ na-achọpụta akara ngwaahịa mkpuchi mkpuchi zuru oke, ọnọdụ edobere nke akara ngwaahịa, akara akara okpukpu abụọ, akara n'ihu na azụ na oghere dị n'etiti ihu na azụ. enwere ike idozi akara.
FK nnukwu ịwụ akara igwe
FK Big Bucket Labeling Machine, ọ dabara maka ịde aha ma ọ bụ ihe nkiri na-arapara onwe ya n'elu elu nke ihe dị iche iche, dị ka akwụkwọ, nchekwa, igbe, katọn, ihe egwuregwu ụmụaka, akpa, kaadị na ngwaahịa ndị ọzọ.Ndochi nke usoro ntinye aha nwere ike dabara adaba maka ịde aha n'elu elu na-enweghị isi.A na-etinye ya na akara ngosi dị larịị nke ngwaahịa buru ibu na akara nke ihe ndị dị larịị na nkọwa dị iche iche.
FK909 Semi akpaaka igwe ndo aha nwere akụkụ abụọ
FK909 ọkara akpaka labeling igwe na-emetụta mpịakọta-rapara usoro ka labelụ, na-aghọta labeling n'akụkụ nke dị iche iche workpieces, dị ka ịchọ mma flat karama, nkwakọ igbe, plastic n'akụkụ aha, wdg High-nkenke labeling pụta ìhè ndị magburu onwe àgwà nke ngwaahịa. ma na-akwalite asọmpi.Enwere ike ịgbanwe usoro ịde aha, ọ dịkwa mma maka ịde aha n'elu ebe na-ekwekọghị ekwekọ, dị ka ịde aha n'elu prismatic na elu arc.Enwere ike ịgbanwe ihe nrụnye dị ka ngwaahịa ahụ si dị, nke a na-etinye na ntinye aha nke ngwaahịa dị iche iche na-adịghị agbanwe agbanwe.A na-eji ya na ihe ịchọ mma, nri, ihe egwuregwu ụmụaka, kemịkalụ kwa ụbọchị, ngwa eletrọnịkị, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Adreesị: Nke 15, Xingsan Road, Wusha, Chang'An Town, Dongguan City, Guangdong Province
© Nwebiisinka 20132021: Ikike niile echekwabara.